Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားလို့ အမည်ခံတဲ့ ဘင်္ဂလီ (၉)ကောင်ကို သေနပ်ပစ်ပြီး ဖမ်းဆီရ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားလို့ အမည်ခံတဲ့ ဘင်္ဂလီ (၉)ကောင်ကို သေနပ်ပစ်ပြီး ဖမ်းဆီရ
ယနေ့ ၁၅-၇-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေ ၅း၃၀ နာရီတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို့နယ်ရှိ တောင်ဖူးရွာနားတွင် မသင်္ကာစရာ စက်လှေဖြင့် ၀င်လာသော ဘင်္ဂလီများကို စစ်တွေအခြေစိုက် တပ်မတော်ရေမှ စစ်ဆေးဖို့အတွက် ရပ်တန့်ရန် အမိန့်ပေးရာ ၄င်းစက်လှေမှ သေနပ်မြင့် ပစ်ခတ်မှု တခုဖြစ်ပွါးခဲ့သည်။
၄င်းကို ရေတပ်မှ ပြန်လည်းပစ်ခတ် တားဆီခဲ့ရာတွင် ဘင်္ဂလီဘက်မှ တစ်ကောင်ဦးခေါင်းတွင် ထိမှန်ခဲ့ပြီး ကျန် ၇ ကောင်ကို လက်ရဖမ်းဆီရမိခဲ့ပါသည်။ ဒဏ်ရာရသော တစ်ကောင်ကို စစ်တွေမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံးကြီးတွင် တင်ထားပြီး ၊ ကျန် ၇ ကောင်ကို စစ်တွေမြို့ရှိ ရေတပ်စခန်းတွင် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်းသတင်းသိရပါသည်။
ရေတပ်စခန်းရှိ စစ်သားတယောက်ကို မေးမြန်ကြည့်သောအခါ “သူတို့သည် ရခိုင်ပြည်မှ ဘင်္ဂလီများမဟုတ်ကြဘဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကော့ဘာဇာခရိုင် တက္ကနမြို့နယ် မူနတီကျေးရွာက ဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့က ပစ်ခတ်သောကြောင်း ကျနော်တို့က ပြန်ပစ်ရတာပါ။
သူတို့ဆီက M-16 လက်နက်(၂)လက်နဲ့အတူ ဘင်္ဂလာ ပိုက်ဆံတွေ၊ တခြား လေးဂွ၊ ကျင်ကလိတွေကိုလည်း ဖမ်းဆီရမိကြောင်း” ပြောပြပါတယ်။ ၄င်းအပြင် စစ်တွေမြို့ပြည်သူဆေးရုံးကြီးတွင် ဒဏ်ရာရပြီးဆေးကုသခံနေသော နေရာကို သွားရောက်ပြီး တာဝန်ကျ သူနာပြုဆရာမတဦးကို မေးမြန်ရာတွင် “ဒဏ်ရာက ဦးခေါင်းတွင်ရရှိခဲ့ပြီး၊ သူကို ဆေးစစ်ချက်တွေ ပြုလုပ်နေတယ်။
သူက ရခိုင်စကားကိုလည်း မတောက်တခေါက်လောက်တတ်ပါတယ်။”လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တခြား အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းအရ စက်လှေ ၈ စီးဝင်လာပြီး ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီသော စက်လှေမှ သေနပ်များကို ရေထဲတွင်ပစ်ချခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းပစ်ချခဲ့သော နေရာတွင် တပ်မတော်ရေမှ ရေငုတ်သားတွေနဲ့ စစ်ဆေးနေကြောင်းသတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ တချို့ ဓာတ်ပုံတိကို D Nwe Oo ဆီမှ ပြန်လည် ဖော်ပြထားပါသည်။
by: ဟင် အင်'s Facebook
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 07:34
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားလို့ အမည်ခံတဲ့ ဘင်္ဂလီ (၉)ကောင်ကို သေနပ်ပစ်ပြီး ဖမ်းဆီရ . All Rights Reserved